SomaliTalk.com » TACSI: Beeldaaji Faarax Beeldaaje Cabdullahi oo ku Geeriyoodey dalka UAE
Waxa Habeenimadii Axadda 8-dii April 2012 ku geeriyoodey Cusbataal ku yaal Magaalada Al Cayn ee dalka UAE Allaha u naxariistee Beeldaajaha Guud ee Beelaha Cali Saleebaan Beeldaaje Faarax Beeldaaje Cabdulahi Beeldaaje Maxamed.
Warsaxaafadeed Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha DFKMG:
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Prof Cabdiweli Maxamed Cali ayaa maanta tacsi u diray shacabka oo ku wajahan geeri ku timid mid ka mid ah Madax dhaqameedka Soomaaliyeed. Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa yiri “Ugu horreyn waxaan shacabka soomaaliyeed iyo gaar ah qoyskii iyo eheladii uga tacsiyeynayaa geeridii shalay fiidkii (Axad 08 April) ku timid Beeldaaje Faarax Beeldaaje Xaaji Cabdullahi Beeldaaje Maxamed oo ku geeriyooday Isbitaal ku yaalla magaalada Al Cayn ee dalka Isutagga Imaaraadka Carabta (UAE).”
“Geeridu waa xaq, waqtigiisa ayaana dhammaaday, waxaana EEBBE uga baryayaa inuu Janadii Fardowsa ka waraabiyo, dhammaan ummadda Soomaaliyeedna Samir iyo IIMAAN ka siiyo.” Ayuu sii raaciyey Ra’iisul Wasaarahu.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Prof Cabdiweli Maxamed Cali ayaa sheegay in Beeldaaje Faarax uu ahaa oday dhaqameed Soomaaliyeed oo waqtigiisa inta badan geliyey sidii beelaha Soomaaliyeed ay ugu wada noolaan lahaayeen nabad iyo barwaaqo. Beeldaaje Faarax waxuu ahaa shaqsi karti iyo hufnaan leh oo door hoggaamineed ka qaatay isu keenida, wadajirka iyo wada noolaashaha beelaha Soomaaliyeed.
Ugas ciise ugas cabdulle ugaaska beesha sade ayaa tacsi u diray
shacabka Somaliyeed ,Tacsidaaa oo ku wajahan geeri ku timid Beeldaaje
Faarax Beeldaaje Xaaji Cabdullahi Beeldaaje Maxamed. Ugas ciise
“Ugu horreyn waxaan shacabka soomaaliyeed iyo gaar ah qoyskii iyo
eheladii uga tacsiyeynayaa geeridii shalay fiidkii (Axad 08 April) ku
timid Beeldaaje Faarax Beeldaaje Xaaji Cabdullahi Beeldaaje Maxamed oo
ku geeriyooday Isbitaal ku yaalla magaalada Al Cayn ee dalka Isutagga
Imaaraadka Carabta (UAE).”
Ugasku waxa uu ILLAAHAY uga baryayaa Marxuumka inuu naxariistii Janno
ka waraabiyo, Qoyskii, Eheladii, Qaraabadii, Asxaabtii iyo Dhamaan
Shacbiga Somaliyeed ee uu ka baxayna Samir iyo Imaan ka siiyo.
Ugas ciise ugas cabdule ugaas i ayaa sheegay in Beeldaaje Faarax uu
ahaa oday dhaqameed Soomaaliyeed oo waqtigiisa inta badan geliyey
sidii beelaha Soomaaliyeed ay ugu wada noolaan lahaayeen nabad iyo
barwaaqo. Beeldaaje Faarax waxuu ahaa shaqsi karti iyo hufnaan leh oo
door hoggaamineed ka qaatay isu keenida, wadajirka iyo wada
noolaashaha beelaha Soomaaliyeed.